Budata Security Ngwanrọ maka Windows
Budata Security Ngwanrọ
Windscribe (Nbudata): Ihe kacha mma nefu VPN mmemme Windscribe kwụpụtara yana atụmatụ ya dị elu na atụmatụ efu. Ihe omume VPN, nke na-enye ohere iji data eji eme ihe karịa 10GB, na-enye atụmatụ ndị VPN akwụ ụgwọ dị ka firewall, ad blocker, tracker blocker, njikwa ọsọ, ọnọdụ nzuzo, abụọ VPN, P2P, nefu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ngwa, dị...
Warp VPN 1.1.1.1 bụ nefu VPN mmemme maka Windows PC. The free Okwey ngwa 1.1.1.1 mepụtara Cloudflare dị maka nbudata maka gam akporo na iOS na-esote Windows 10. Ọ bụrụ nị na-achọ nefu VPN ọrụ maka kọmputa gị, ana m akwado VPN Cloudflare Warp VPN. Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 Budata Warp VPN 1.1.1.1, nke so netiti ọtụtụ ngwa VPN...
Gịnị bụ Tor Browser? Tor Browser bụ ihe nchọgharị intaneti a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ kọmputa na-eche banyere nchekwa na nzuzo ha nịntanetị, iji chọgharịa na ịntanetị na-enweghị aha na ịnyagharịa site na iwepu ihe mgbochi niile na ụwa ịntanetị. Akụrụngwa ahụ, nke na-arụ ọrụ dị ka ọta siri ike maka nchebe nke okporo ụzọ netwọkụ...
Bitdefender Antivirus Free bụ otu nime mmemme antivirus kachasị dị irè ị nwere ike iji nefu na kọmputa gị. Ninwe ngwanrọ dị mfe ma dị mfe, mmemme antivirus na -emere gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nchebe ọ bụla ma wepu ọgba aghara ọ bụla. Bitdefender, nke dị na tray sistem ma na-enye nchebe ozugbo ozugbo na-enweghị ike ọgwụgwụ...
McAfee Rootkit Remover bụ ngwa na -aga nke ọma nke na -enyere ndị ọrụ aka ịchọpụta ma hichapụ rootkits, nke bụ ngwanrọ ọjọọ nke enweghị ike ịchọpụta nụzọ nkịtị na kọmputa gị. Rootkits bụ malware dị oke egwu nihi na ha nwere ike zoo onwe ha. Na mgbakwunye, rootkits, nke nwere ike zoo nje ndị ọzọ nkịtị na malware, bụ ihe nwere oke ihe...
Avast Free Antivirus, nke na-enye sistemụ nchedo virus anaghị akwụ ụgwọ maka kọmputa ndị anyị jiri nụlọ anyị na ebe ọrụ anyị ọtụtụ afọ, ka a na-emepe ma na-emelite megide egwu egwu Kọmputa ọ bụla na-eji Ntanetị, nọ na ntanetị ọbụlagodi na ejikọghị ya na ,ntanetị, ejikọghị na netwọki ọ bụla ma ọ bụ na Internetntanetị, nwere ihe ize ndụ...
Norton AntiVirus bụ usoro ihe ngwọta na nchekwa nchekwa ọkachamara na-enye nchebe dị elu megide nje, spyware, na nkenke, mmemme niile na faịlụ ndị nwere ike imerụ kọmputa gị. Ọ bụrụ nịchọrọ ichebe kọmputa gị nke ọma ma debe sọftụwia jọgburu onwe ya nke nwere nsogbu nchekwa na sistemu gị, ị nwere ike ime nke a na Norton AntiVirus, nke...
AVG AntiVirus Free dị ebe a nwere nsụgharị ọhụrụ nke na-ewe obere ohere ma belata ojiji nchekwa ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga. Na ijikọta nkwupụta nke nyocha ngwa ngwa na arụmọrụ ka mma, sọftụwia ahụ na-abịa na mgbanwe dị mkpa na nhazi interface yana ụdị 2020. Emepụtara mmemme ahụ iji mata sọftụwia antivirus adịgboroja. Karịsịa...
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) bụ antivirus nefu na ngwa ngwa maka ndị ọrụ Windows PC ibudata. Kaspersky Free Antivirus 2020 bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi netiti mmemme antivirus free. Budata Kaspersky Free Antivirus Kaspersky Security Cloud Free bụ otu nime mmemme antivirus na-akwụghị ụgwọ maka Ohere. Ihe nchebe antivirus...
Ihe omume Betternet VPN bụ netiti ngwaọrụ ndị nwere ike ime ka ndị ọrụ PC nwere sistemụ arụmọrụ Windows iji nweta ahụmịhe VPN nefu na-akparaghị ókè nụzọ kachasị mfe. Nihi ọrụ VPN nke ngwa ahụ na-enye, ọ ga-ekwe omume ịnweta weebụsaịtị ndị egbochiri yana ọrụ weebụ egbochi, ọ ga-ekwe omume ichebe nzuzo onye ọrụ na data na ebe a na-eji...
AVG Secure VPN bụ nefu VPN sọftụwia maka Windows PC (kọmputa). Wụnye AVG VPN ugbu a iji kpuchido netwọki WiFi gị ma chọgharịa na-enweghị aha. AVG Secure VPN ma ọ bụ AVG VPN bụ mmemme VPN nefu nke enyere Windows PC, Mac kọmputa, ekwentị gam akporo na ndị ọrụ iPhone. Iji kpuchido netwọki WiFi gị ma chọgharịa na ịntanetị na nzuzo, pịa AVG...
DotVPN bụ otu ihe kachasị amasị VPN site na ndị ọrụ Google Chrome. Na-enye anyị ohere ịbanye na mba iri na abụọ gburugburu ụwa, VPN na-echebe anyị pụọ nụdị mgbasa ozi niile na-emebi nzuzo nịntanetị, gụnyere mmapụta na ọkọlọtọ ọkọlọtọ na ibe weebụ. Gị abụọ na-emefu obere ngwungwu ịntanetị ma na-agagharị na ngwa ngwa. VPN, nke na-enye...
Debe nchekwa VPN a na - akparaghị ókè bụ ọrụ VPN nke na - enye ndị ọrụ ohere ịnweta saịtị egbochi ma chọgharịa na anntanetị na-enweghị aha. Nwere ike ịchọgharị na ịntanetị kpam kpam ekele maka mmemme ị nwere ike ịnweta dị ka nbudata VPN. Olee otú Wụnye VPN Unlimited? Nihi VPN Unlimited, nke ị nwere ike iji zere ihe mgbochi ịntanetị nke...
Chebe Disk m bụ sọftụwia nchekwa efu na -enye gị ohere ichebe mkpanaka USB na kọmputa gị pụọ na nje Autorun, nke na -ewu ewu noge na -adịbeghị anya. Ọbụlagodi na ichekwa kọmpụta gị site na enyemaka nke mmemme antivirus, ị nwere ike nweta nsogbu mgbe ị na -etinye ebe nchekwa USB na kọmpụta ọzọ. Ị nwere ike iji Chebe Disk m iji zere ụdịrị...
Na ComboFix, ị nwere ike ihicha nje mgbe akụrụngwa antivirus gị anaghị arụ ọrụ ComboFix bụ sọftụwia nwepu nje nwere ike iji ma ọ bụrụ na malware wakporo kọmputa gị dịka nje, trojans, rootkits, adware, spyware, malware na antivirus gi adighi egbo mkpa gi iwepu ngwanro ojoo a. Combofix nwekwara ike wepu nje virus na-emebi ọrụ kọmputa gị...
NordVPN bụ otu nime ngwa ngwa VPN echekwara maka ndị ọrụ Windows. Mmemme VPN, nke na-abịa na njiri mara mma dịka ịgagharị echedoro, igbochi mgbasa ozi, bandwidth VPN na-akparaghị ókè, usoro izo ya ezo nke ọkwa ndị agha, ịkekọrịta P2P, na-enye oge nnwale nefu ụbọchị 7. NordVPN, nke na-abịa na njirimara dị elu dịka ngwa ngwa VPN...
Ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche na-eyi egwu kọmputa anyị egwu, dịka nje, ikpuru, spyware, yana malware, nwere ike ọ nwute ibute nsonaazụ dị egwu dị ka ọnwụ data, ihe onwunwe na omume omume, ọ na-esiri ndị ọrụ ike iguzogide ha niile site na iji naanị otu antivirus. Nihi na mgbe mmemme antivirus na-enwekarị ihe ịga nke ọma nịchọpụta ihe egwu,...
Malware Hunter bụ mmemme na-enyere aka ichebe gị pụọ na nje virus Malware Hunter bụ mmemme antivirus ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ichedo kọmputa gị pụọ na nje na-enweghị isi na malware. i scanomi ma wepu nje na kọmputa gị. Malware Hunter na-eji ngwa njirimara nje virus Avira amata nje virus wee si otú a nwee ike ijide nsonaazụ...
Emsisoft Anti-Malware bụ mmemme nke nwere ike ichebe gị nke ọma na ngwanrọ ọjọọ. Imelite nke nchekwa data mgbe niile pụtara na ọ nwere ike ịmata malware ọhụrụ ozugbo enwere ike. Emsisoft Anti-Malware, nke na-enyocha ngwa niile na-agba nazụ dị ka ngwanrọ antivirus ma chọpụta sọftụwia ọjọọ, ị nwere ike igbochi ngwanrọ ọjọọ tupu ya arụ ọrụ....
AdwCleaner bụ nchekwa nchekwa dị ike ma dị elu nke na-echebe ndị ọrụ kọmputa pụọ ​​na ngwanrọ ọjọọ na-ekesa na ịntanetị. Ọ bụrụ na ịnweghị mmemme antivirus ọ bụla na kọmputa gị, ọ bara uru iji nyochaa kọmputa gị maka malware ọ bụla site na nyocha site na enyemaka nke AdwCleaner site noge ruo noge. Ọ dị naka gị iji nọrọ na nchekwa na...
Nilebara anya na ngwa ya di mfe ma bara uru maka Windows, Carifred na aru oru yiri ya ma nyere komputa aka na ngwa a na-akpọ Ultra Adware Killer. Ngwa a na - enyere gị aka wepu sọftụwia Adware gị na - emebi kọmputa gị. Ọ bụrụ na enwere akaụntụ ndị ọzọ na kọmputa ahụ, ọ gaghị adị mkpa ka ị mepee akaụntụ onye ọrụ ọzọ oge ọ bụla, nihi...
360 Total Security bụ antivirus software na-enye ndị ọrụ keukwu nchedo nje ha kọmputa, yana bara uru ọzọ atụmatụ dị ka kọmputa osooso na junk faịlụ ihicha. You nwere ike ịnweta ụdị adịchaghị nke 360 ​​Total Security site na njikọ dị nokpuru. 360 Total Nche Adịghị Etu esi etinye 360 ​​Total Security? Na vidiyo dị nokpuru, anyị...
Njikwa Firewall Windows bụ obere ngwa na -agbatị arụmọrụ nke Firewall Windows ma na -enye gị ohere ịnweta nhọrọ a na -ejikarị Windows Firewall. Usoro ihe omume a na -arụ ọrụ na tray sistem ma na -egbochi ndị ọrụ imefusị oge site na ịnweta ntọala firewall ngwa ngwa. Site na Njikwa Firewall Windows, ntọala firewall gị niile ga -adị mfe ma...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwa ịgbawa Apple ID paswọọdụ ma ọ bụ ịgbawa iPhone ihuenyo mkpọchi Paswọdu, iMyFone LockWiper ka emere maka nke ahụ. Iji zụta, gaa na adreesị a. Ichefu gị iPhone ihuenyo mkpọchi paswọọdụ ma ọ bụ Apple ID bụ otu nime ihe ndị kasị nkịtị ọnọdụ. Dị ka ị maara, ọ nwere ike isi ike iburu ha niile nuche na oge...
VeePN bụ ngwa ngwa, nchekwa na mfe iji VPN mmemme nke na-eme ka nzuzo na nchekwa dị nịntanetị. Ọ na-abịa na njirimara dị elu nke na-ebuli ọkwa nke nchekwa na ọkwa ọzọ, dị ka njikọta notu oge na ngwaọrụ 10, nchedo nchedo DNS, bandwidth na-akparaghị ókè na ọsọ, ngbanwe sava na-akparaghị ókè, izo ya ezo nke ndị agha, ọtụtụ ogbugba ndu VPN,...
CyberGhost VPN bụ mmemme VPN nke na - enye gị ohere ịbanye na ịntanetị na nzuzo site na izochi data nkeonwe gị na njirimara gị. Notu oge ahụ, site nenyemaka nke usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ohere ịnweta ohere na-enweghị njedebe na weebụsaịtị niile ịchọrọ na enweghị mmachi ma ọ bụ mmachibido ọ bụla na ịntanetị. Na-arụ ọrụ nokpuru...
Kaspersky Total Security bụ ọrụ kachasị elu, ọkacha mmasị na ụlọ nchekwa. Multi-ngwaọrụ ezinụlọ nche na antivirus, ransomware nchebe, kamera nche, paswọọdụ njikwa, Okwey na 87 teknụzụ, niile na otu ikike. Download Kaspersky Total Security 2021 ugbu a iji kpuchido ezinụlọ gị na ụmụaka sitere na ransomware na egwu ndị ọzọ. Budata...
Ngwa maka ịchọpụta ụdị mmemme Keylogger nke na -eme ka ị chekwaa data etinyere na keyboard wee kesaa ya netiti ndị ọzọ. Site na mmemme ụdị keylogger, enwere ike izuru okwuntughe ụlọ akụ gị, ozi ịntanetị na okwuntughe yiri ya. Ohere a dị elu karịa na cafes ịntanetị mepere ọha. Yabụ, ọ bụ mmemme ị nwere ike ịchọrọ maka nchekwa nke...
Kaspersky Internet Security 2021 na-enye nchebe kachasị elu megide nje, ikpuru, spyware, ransomware na ihe egwu ndị ọzọ. Ọzọkwa, na Kaspersky VPN, ị na-ezochi ihe nchọgharị gị, ebe ị na-edebe foto gị, ozi na ozi akụ na-enweghị ike ịnweta hackers. Kaspersky Internet Security nefu ikpe na-agụnyekwa Kaspersky Safe Kids, Kaspersky VPN Secure...
Onye njikwa ọrụ nchekwa bụ onye njikwa nchekwa emebere ka ọ nye gị ozi zuru ezu gbasara usoro niile (ngwa, DLL, BHO na ọrụ) na -arụ na kọmputa gị. Maka usoro ọ bụla, ọ na -akwalite Njikwa Task Windows ma na -enye gị ogo ihe egwu nchekwa, nkọwa usoro, ụzọ faịlụ, eserese ojiji CPU, oge mbido, ọrụ ndị ọzọ zoro ezo (dịka nleba anya keyboard,...
Opera GX bụ ihe nchọgharị ịntanetị mbụ emere maka ndị egwuregwu. Mbipụta pụrụ iche nke Opera nchọgharị, Opera GX, gụnyere atụmatụ pụrụ iche iji nyere gị aka ị nweta ọtụtụ egwuregwu na nchọgharị. Budata Opera GX Not nwere ike ọ bụghị naanị nyochaa ojiji RAM na CPU site na ihe nchọgharị ahụ, kamakwa ịchịkwa ebe nchekwa na oriri...
Ngwa TuneUp AVG Web dị netiti ngwa ị nwere ike iji mee ka ihe nchọgharị ịntanetị dị nchebe ma nye mkpa nzuzo onye ọrụ mkpa. Ngwa ihe nchọgharị, nke na -egbochi ihe egwu nwere ike ibute na kọmputa gị na ịntanetị tupu ị banye na webụsaịtị, nwere ike igosi gị ọkwa ihe egwu dị na weebụsaịtị wee gosi gị ka ị kpachara anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ,...
Kaspersky Anti-Virus 2017 bụ otu nime mmemme antivirus kacha mma dị maka ndị ọrụ Windows PC taa, yana egwu na-arịwanye elu nịntanetị. Ọ na-enyocha usoro a oge niile iji chebe gị pụọ na nje virus kachasị ọhụrụ, trojans, malware na egwu ndị ọzọ, ọbụlagodi na ị na-agagharị na netwọk mmekọrịta, ụlọ akụ, ịzụ ahịa, na igwu egwu egwuregwu. ...
UFO Okwey bụ otu nke kasị mma free Okwey omume maka Windows PC. Na UFO VPN, ọrụ # 1 nefu VPN na ndị ọrụ 20 nde si nakụkụ ụwa niile, ị na-echebe nzuzo gị nịntanetị ma nọrọ na-enweghị aha na netwọọdụ WiFi ọha, nweta weebụsaịtị niile, na-agagharị na ịntanetị na-enweghị nchebe na nchebe nchebe. Ọrụ VPN kachasị mma maka PC, Elu na ngwaahịa...
Ngwa OpenVPN bụ ihe na-emeghe na nefu VPN ngwa nwere ike ịhọrọ nke ndị chọrọ ichedo nchekwa na nzuzo ha na ịntanetị, yana ndị chọrọ ịnweta weebụsaịtị ndị emechibidoro ndị ọrụ na mba anyị. Ihe omume a nwere ọrụ SSL VPN zuru oke ma na-akwado ọtụtụ nhazi. Ekele ya maka nhọrọ ya dị elu dị ka ohere dịpụrụ adịpụ, saịtị saịtị na saịtị VPN,...
Avira Free Antivirus bụ antivirus efu siri ike maka ndị ọrụ chọrọ ichebe kọmpụta ha megide nje, trojans, ndị ohi njirimara, ikpuru, malware na ọtụtụ ndị ọzọ. Na-enye ndị ọrụ interface ahaziri nke ọma na nchekwa data antivirus na-emelite mgbe niile megide iyi egwu kachasị ọhụrụ, mmemme ahụ bụ nhọrọ nke mbụ maka ndị ọrụ chọrọ iji...
Hotspot Shield bụ usoro nnọchiteanya siri ike nke na-enye gị ohere ịchọgharị na ịntanetị na-enweghị aha site na ịzobe njirimara gị na ịnweta saịtị ndị amachibidoro iwu na-enweghị mkpa maka ngwanrọ ọzọ. Hotspot Shield, ngwanrọ nke dabeere na VPN, bụ otu nime ngwanrọ nke ndị ọrụ ịntanetị na mba anyị na-akpọkarị mmemme VPN na mmemme nnweta...
Avast Premium Security bụ mmemme nchekwa dị elu nke na -enye nchebe kachasị maka kọmputa gị, ekwentị na mbadamba gị. Karịa naanị antivirus, Avast Premium Security na -enye nchebe zuru oke nịntanetị maka desktọpụ gị na ngwaọrụ mkpanaka gị niile. Nagbanyeghị ngwaọrụ ọ bụla ị na -eji, Windows PC, kọmputa Mac, ekwentị gam akporo, iPhone ma...
Windows 10 Njikwa Firewall pụtara dị ka ngwanrọ nchekwa ị nwere ike iji na kọmpụta desktọpụ gị. A na -echekwa ozi gị na ngwa a dị ike nke na -enyere gị aka ịnọ na nchekwa na ịntanetị. Ngwá ọrụ dị mfe na nke zuru oke, Windows 10 Njikwa Firewall bụ mmemme nke ị nwere ike nyochaa ọrụ na netwọkụ gị wee gbochie ọnọdụ achọghị. Site na ngwa na...
Site na ndọtị Touch VPN maka nchọgharị Google Chrome, ị nwere ike ịchọgharị na ịntanetị na ngwa ngwa na ngwa ngwa na-enweghị egbochi. Ngwa VPN bụ ndị mbụ na-abata nuche mgbe enweghị ike ịnweta weebụsaịtị ma ọ bụ ịntanetị dị nwayọ nwayọ. Enwere ike iji ndọtị Touch VPN, nke na-enye gị ohere ịchọgharị na safelyntanetị nenweghị nsogbu,...
AdGuard VPN bụ ndọtị VPN maka Google Chrome. Nwere ike ịchọgharị na ịntanetị na-enweghị aha na kpamkpam na mmemme VPN, nke bụ nke ndị okike nke AdGuard, ngwa mgbasa ozi kachasị ibudata na Windows PC, ekwentị gam akporo Younwere ike ịgbakwunye ndọtị VPN na ihe nchọgharị Chrome gị nefu site na ịpị bọtịnụ AdGuard VPN Download dị nelu. ...
Iji Ngwá Ọrụ Ransomware ihuenyo mkpọchi site na Trend Micro, ị nwere ike ihicha ihe mgbapụta nke na -egbochi gị ịnweta sistemụ gị. Ransomware bụ ngwanrọ ọjọọ nke na -egbochi gị ịnweta sistemụ ma ọ bụ faịlụ gị, na -amanye gị ịkwụ ụgwọ. Ngwanrọ ọjọọ ndị a na -abanye na sistemụ gị site na saịtị ndị ị na -eme nchọgharị, mmemme ị na -ebudata...
ESET NOD32 Antivirus 2021 bụ mmemme antivirus dị elu nke na-echebe ndị na-agba ọsọ, ransomware na phishing. Ọ na - egosipụta ọdịiche dị iche na mmemme antivirus ndị ọzọ na ọ na - echebe site na ụdị malware niile, gụnyere nje, ikpuru, spyware, ransomware, ma na - ejigide ezigbo nchekwa na - enweghị usoro, igbochi mmelite sistemụ na iwe...
Budata hide.me VPN hide.me VPN bụ otu nime nefu na ngwa ngwa VPN mmemme nke na-enye gị ohere ịgagharị na weebụ na-enweghị aha na nchekwa. Site na mmemme VPN na -eje ozi na ọnọdụ 56 na sava 1400 na Eshia, Europe na America, ị nwere ike ịnweta saịtị egbochiri dị ka Wikipedia, lelee vidiyo dị oke mma na enweghị nkwụsị na nyiwe ikiri vidiyo...
AVG Secure Browser na-apụ apụ dị ka ihe nchọgharị fastntanetị ngwa ngwa, nchebe na nkeonwe. Ihe nchọgharị AVG, nke nwere atụmatụ adịghị na ihe nchọgharị weebụ nkịtị dịka ọnọdụ incognito, na-egbochi mgbasa ozi na-akpaghị aka, na-enyere aka iji HTTPS izo ya ezo, nchebe megide nsuso ederede, akara mkpisiaka zoo, enwere ike ibudata na...
Njikọ Kaspersky Secure bụ mmemme VPN ị nwere ike ibudata ma jiri dị ka onye ọrụ Windows PC nenweghị nsogbu ọ bụla. Ọrụ VPN, nke ị nwere ike iji nefu otu ọnwa, anaghị eme ka ọ dịrị gị mfe ịbanye na saịtị egbochiri; ọ na -echebe nzuzo gị nịntanetị, data, ozi. Taa, mmemme VPN etinyere nihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmpụta onye ọrụ na...
Zenmate bụ otu nime mmemme VPN kachasị amasị nụwa nke ị nwere ike iji dị ka mgbakwunye na kọmpụta desktọọpụ gị na ihe nchọgharị dịka Google Chrome, Mozilla Firefox na Opera. ZenMate bụ mmemme VPN ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta saịtị ndị amachibidoro iwu na enweghị nsogbu ma na-echekwa nzuzo gị na !ntanetị! Budata ZenMate - Mmemme...
GridinSoft Anti-Malware bụ mmemme iwepụ nje nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ngwanrọ ọjọọ na-ebuso kọmputa gị agha. Mgbe anyị na -achọgharị ịntanetị, anyị nwere ike ibudata faịlụ dị iche iche wee pịa njikọ dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike nyefee faịlụ site na itinye ncheta mpụga nke anyị zụtara naka ndị enyi anyị ma ọ bụ ndị ọzọ...